2019 August | | Horufadhi Online
Daawo:-Soomaliland Muuse Biixi oo la doonayo in xilka laga tuuro ka hor intuusan dhamaysan-Video
BurcoÂ ( HM ) Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka maamulka Somaliland ee UCID ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland la qaban waayo, in taasi bedelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda ka soo hor marta. HALKAN KA DAAWO VIDEO â€œHadii uu muuse sidan aanu waxba ka badali mayno,Â Â Â Â Â Ku eegi mayno, Doorasho […]
August 31st, 2019 | Posted in wararka | Read More »
Maamulka Jubaland oo sheegay in aysan u dhutin doonin xayiraada Dowladda Federaalka-Akhriso
Kismaayo (HM)-War ka soo baxay Maamul goboleedkada Jubaland ayaa lagu sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin goâ€™aankii ay dowlada federalka ugu soo rogtay xayiraada diyaaradaha tooska u taga magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Jubaland ayaa lagu sheegay in aysan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka goâ€™aanka dowlada federalka ka gaartay doorashada Jubbaland iyo […]
Daawo:-Qaabka Dowladda Soomaaliya gacanta ugu dhigtay wasiirka Jubaland iyo xog dheeri ah-Video
Muqdisho (HM)-Warbaahinta Horufadhi News ayaa xog dheeri ah ka heshayÂ xariga wasiirka aminiga Jubaland,Cabdirashiid Janan oo maanta ay ciidamada booliska Soomaaliya ka xireen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Janan ayaa markii la xirayey wuxuu ka yimid magaalada Doolow ee gobolka Gedo, isaga oo ku socday magaalada Addis-Ababa, balse transit ku ahaa Muqdisho. Ilo-wareedyo ka tqirsan maamulka Jubaland […]
Daawo:-Midowga yurub oo saxiixay dhaqaalle lagu dhisayo Muqdisho iyo Berbera-Video
Muqdisho (HM ) Wasiirka Qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, iyo agaasimaha guud ee midawga Yurub ee horumarinta caalamiga ah, Mr Stefano Manservisi ayaa si wadajir ah maanta u saxiixay 23 Milyan Yuuro oo midaqga Yurub ay ku maal gelinayaan mashruuca horumarineed ee Eng. Yariisow oo ka qayb qaadanaya horumarinta magaalooyinka Muqdisho iyo Berbera. […]
Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo kulan xasaasi ah la qaatay dhiggiisa Jabaan-Video
Muqdisho (HM)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maalmahan u joogay dalka Japan ka qaybgalka Shirweynaha 7aad ee Horumarinta Afrika (TICAD7) ayaa maanta wada-hadallo labo geesood ah kula yeeshay magaalada Tokyo Raâ€™iisul Wasaaraha Japan Mudane Shinzo Abe. Wada-hadallada Madaxweyne Farmaajo iyo Raâ€™iisul Wasaare Shinzo Abe ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo […]
Ciidamadda Soomaliland oo albaabada iskugu dhuftay Meherad Itoobiyaan ku leeyahay Burco iyo Dadkii lahaa..
Burco (HM)-Soomaliland Ciidamada booliska magaalada Burco ayaa albaabada isugu dhuftay maqaaxida laga cunteeyo ee Warsan, oo lagu sameyn jiray cuntada Itoobiyaanka. Ciidanka ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay dadkii Itoobiyaanka ahaa ee halkaasi ka shaqeynayay. Culimada gobolka Togdheer ayaa la sheegay in ay meheraddan ku soo eedeeyeen in Musica lagu dhagaysto sidoo kalana ay is […]
Deg Deg:-Xaalaada Magaalada Kismaayo oo kacsan iyo Banaanbax ka socda..
Kismaayo (HM)-Banaan bax looga soo horjeedo amarkii dowladda Federaalka ku soo rogtay diyaaradaha ayaa ka socda magaalada Kismaayo, iyadoo boqolaal ruux ay isugu soo baxeen waddooyinka. Banaan baxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Jubbaland ayaa looga soo horjeedaa amarka lagu soo rogay diyaaradaha taga Kismaayo, taasoo ay ku tilmaameen cunaqabateyn iyo goâ€™doomin. Dibad baxayaasha […]
Daawo:-Ciidamadda AMISOM oo gaadhay Dhuusamareeb iyo goobaha ay la wareegayaan-Video+Sawiro
Muqdisho (HM)-Waxaa saaka magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug gaadhay ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Jabuuti oo kasoo kicitimay magaalada Baladweyne. Xildhibaano katirsan labada Aqal , masuuliyiin iyo saraakiil katirsan ciidanka dowlada federaalka ayaa duleedka magaalada Dhuusomareeb kusoo dhaweeyay ciidamadan katirsan AMISOM ee saakay soo gaadhay Dhuusomareeb. HALKAN KA DAAWO VIDEO […]
Mustafe Cagjar oo rejo ka qaba in Af Soomaaliga laga dhigo Luuqada shaqada ee Dowlad deegaanka.
Â Jigjiga (HM)-Madaxweynaha Kalinka Shanaad, Mustafa Maxamed Cumar Cagjar, ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta Oromada waxa uu kusoo qaadey arrimo kala duwan degaanka iyo federaalka ah. Mr Cagjar oo xafiiska yimid isbedelka gobolka ka dhacay ayaa si dadban waxa uu u duray xisbiga Tigreyga, kuwaasi oo lagu eedeeyo in ay “si qaldan” u dhigaan nidaamka federaalka […]
Akhriso:-Axmed Madoobe oo codsi usoo diray Madaxweyne Farmaajo, kana codsaday hal arrin.
Muqdisho (HM) â€“Â Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa warqad u diray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo uu ku dalbaday in xal laga gaaro khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubaland. Warqaddan oo la qoray 28-kii August, ayaa sax ahaanshaheeda waxaa Warbaahinta u xaqiijiyey xafiiska Axmed Madoobe iyo […]